Maxay yihiin kali, la xaqiijiyay, iyo laba-jibaarista? | Martech Zone
Maxay yihiin kali, la xaqiijiyay, iyo laba-jibaarista?
Jimcaha, Sebtember 9, 2016 Jimcaha, Sebtember 9, 2016 Douglas Karr
Iyadoo aan loo eegin nooca farriinta suuqgeynta ee aad samaynayso, waxaad u baahan doontaa inaad siiso habraac loogu talagalay rukunka inuu doorto farriimahaas. Wadamada badankood iyo siyaasadaha ganacsigu waxay dhaqan galiyaan nooc ka mid ah xeerarka anti-spam, sidaas darteed duubista ilaha iyo waxqabadyada dabeecadaha waa muhiim. Waa kuwan hababka:
Hal-Bixitaan - Tani waa habka caadiga ah ee loogu talagalay emaylka iyo fariimaha qoraalka ah. Macmiilku wuxuu iska diiwaan geliyaa goob ama shirkad baa keensata madal fariin ah. Faa'iidada hal-doorbiddu waxay ku jirtaa fudeydkeeda, oo aan u baahnayn is-dhexgal dheeri ah. Burburinta hal-doorbid ayaa ah in foomkaaga la bartilmaameedsan karo isla markaana cinwaannada dabinka spam si toos ah loogu qoro liiskaaga. Waxaad ka heli kartaa emaylladaada oo xiran wadada. Faa'iidada hal-doorbid ayaa ah in dadka isticmaala ay inta badan doortaan rukhsad laakiin aysan ku qaadi doonin talaabo dheeri ah habab laba-doorbid.
Ka-Bixitaan Keliya oo Xaqiijin ah - Tani waa habka ugu fiican ee loogu talagalay hal-qorista farriimaha hal mar laakiin inta badan waa la iska indhatiray. Farriin wanaagsan oo soo dhaweyn ah oo xaqiijineysa in macmiilku uu doortey uuna dejinayo waxyaabaha laga filayo inta jeer ee farriimaha la diri doono iyo qiimaha ay u keenayaan macmiilku waa istiraatiijiyad weyn.
Laab Laab Labaad - Dhammaan barnaamijyada farriimaha la soo diraa waxay kaa doonayaan inaad adeegsato hanaankan maxaa yeelay waxay yareysaa halista kasta ee ah cabashooyinka spam. Macmiilku wuxuu ku dooranayaa foom, soo dejin, ama fariin qoraal ah. Taasi waxay la socotaa farriin deg deg ah oo lagu xaqiijinayo gelitaanka. Haddii ay tahay emayl, waa inay sida caadiga ah guji xiriiriyaha emaylka. Hadday tahay farriin qoraal ah, waa inay kaga jawaabaan xaqiijin ay dooranayaan.
Waxa kale oo jira cilmi nafsi qaar ka mid ah oo ku lug leh laba-doorbid:
Kala-doorashada laba-geesoodka ah ayaa asal ahaan ku soo dhacaya mabda'a isu-celinta, a sharciga aasaasiga ah ee cilmu-nafsiga bulshada taas oo leh xaalado badan oo bulsheed, waxaan dib ugu celinaa wixii aan ka helnay kuwa kale. Ku bilow xiriirka adiga oo tusinaya inaad xushmeyso qofka - iyo cinwaanka iimeylka ay ku siinayaan - adiguna waxaad isku dejisay inaad ku soo celiso labadaba isweydaarsiga iyo qiimaha furan.
Sawir gacmeedkan ka socda Salesforce, Sidee Cilmu-nafsiyeedku E-mayladaada uga dhigi karaa Rafcaan badan, wuxuu ku dhex maraa nooc kasta oo la doorto oo wuxuu ka hadlayaa macnaha shakhsi ahaaneed ee waayo-aragnimada emaylkaaga si loo kordhiyo ka-qaybgalka loona yareeyo diiwaangelinta iyo warbixinnada SPAM. Waxay sidoo kale wax ka qabataa shakhsiyeynta iyo hagaajinta khadadka mawduuca si loo kordhiyo kaqeybgalka.
Tags: opt-in la xaqiijiyaylaba jibbaar ahhal xulashowaa maxay fariin xaqiijin ahwaa maxay opt opt-kawaa maxay opt-in
Iibinta Iskaa-u-adeegsiga ama Qiime-Ku-saleysan Qiime - Waa Waliba Waa Khibrad